ထမင်းဆိုင်တွေလည်းပိတ်တော့အဆောင်ကျန် international sutdents ​တွေလည်းအပြင်ထွက်မစားရင်
အဆောင်အောက်က 7/11 မှာအသင့်စားခေါက်ဆွဲနဲ့ထမင်းဗူးတွေဝယ်စားကြရတယ်။အိုးခွက်ရှိတဲ့သူတွေ
ဆောင်ထားလို့ အဆင်ပြေတယ်။ အခုတင်တဲ့ပို့စ်ကတော့ စိတ်လိုလက်ရရှိတဲ့အခါ တခါတလေချက်စားဖြစ်တဲ့ဟင်းခွက်လေးတွေပါ။
သဘွတ်သီး ပဲသီး ခရမ်းသီး မုံလာထုပ် နဲ့ ကြက်သားသပြွမ်း
ခရမ်းချဉ်သီးထောင်းစားချင်လို့ ဌာနကမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကိုမီးဖုတ်ပြီး ထောင်းစားတုန်းက
မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးလူပျိုဖျော်း)
ထမင်းဆိုင်က ပါဆယ်ထုပ်ပြီး စားနေကျ ထမင်းထုပ်ပုံစံ
ရွှေပဲသီး မုံညှင်းဖူး မုံလာထုပ် ခရမ်းသီး အသီးအရွက်ကြော်
မျှစ် ခရမ်းသီးချဉ်ပေါင် ချဉ်စပ်
မုံလာဥနီ ပန်းမုံလာ ဖြူစိမ်း ပြောင်းဖူးအသေး ရွက်စုံကြော်
ညဈေးတန်းကို သူငယ်ချင်းနဲ့သွားလည်တာ ထိုင်စရာနေရာမရှိလို့ ပါဆယ်ထုပ်ပြီး အဆောင်ရောက်မှရေနွေးသောက်ရင်း စားရတဲ့ သဘောင်္သီးထောင်း ပှုဇွန်လုံးတွေထည့်ထောင်းပေးလိုက်တာ မစားရဲလို့ ဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်း)
ရာထူးတိုး နဲ့ အတန်းပြီးတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ခေါက်ဆွဲကြော် စားလို့ကောင်းလို့
သူငယ်ချင်းတွေက ခေါက်ဆွဲကြော်စားတိုင်း ကိုအညာသားလက်ရာကို သတိရနေတော့မှာတဲ့း)
ဒါလည်း အမေ့လက်ရာကိုသတိရလို့ ချက်စားတဲ့ ငါးပိချက် ပေါက်ပန်းဖြူရွက်ပြုတ်နဲ့ အလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းပါး)
ဝက်သားနဲ့ ပိန္နဲသီး သပြွမ်း
ဒီဟင်းချက်တဲ့နေ့က ထမင်းအိုးလုံးပြုတ်တယ်း)
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, December 28, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
နှင်းမဖွေး မိုးအေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာ
ကျောင်းအပြန် မှောင်စပျိုးချိန် အဆောင်ဝရံတာကနေ တောင်တန်းတွေဆီမျှော်ကြည့်မိခိုက်
အတိတ်က ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ အညာမြေကအရိပ်တွေဆီခဏတာပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။
မနက်အိပ်ယာထချိန်နဲ့ ညနေကျောင်းပြန်ချိန်တိုင်း နှုတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့ အဖော်မွန်လေးများ
တသက်တာ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် သစ်ပင်စိုက်ပါတဲ့
ဒီဇင်ဘာနံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အဆောင်ပေါ်မှမြင်ရတဲ့ ကန်ရေပြင်
တခုသောညနေ အလုပ်တွေခဏထားပြီး ဌာနအောက်ဆင်း လေကောင်းလေသန့်ရှုရင်း
ကောင်းကင်ပြာအောက်မှာ လှပနေသော ကျောင်းထဲက ရွှေဖရုံသီးအဆောက်အအုံ လက်ချာဟောခန်း လေးခုရှိတယ် ကျောင်းသူကျောင်းသားအများကြီးဆန့်တဲ့ သီရေတာ တွေပေါ့
ဘာပန်းခေါ်သလဲ မသိပေမဲ့ ကျောင်းသွားလမ်းဘေးမှာ အမြဲတမ်းပွင့်တတ်တဲ့ လောကကိုရှိသမျှအလှနဲ့ အလှဆင်ပြီး တာဝန်ကျေပွန်နေတဲ့ ပန်းတစ်ခက်
စိန်ပန်းဝါ လို့ခေါ်သလားမသိ အပွင့်ချင်းဆင်တဲ့ ခရမ်းရောင် လည်းတွေ့တယ်
တောင်ခိုးတွေဝေတဲ့ တစ်ခုတော့ ဒီဇင်ဘာ နေ့တနေ့
အဲ့ဒီနေ့က ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုငေးရင်း ပုပ္ပားမြေက အမေ့အိမ်ကိုလွမ်းမိတယ်
ရှိသမျှအလှနဲ့ လောကကို အလှဆင်နေတဲ့ သစ်ခွပန်းတွေ
ကျောင်းဝန်းထဲမှာပဲ အမည်မသိတဲ့ နောက်ထပ် ပန်းတစ်မျိုး သူ့အလှနဲ့သူ လောကကို အလှဆင်နေရဲ့
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, December 24, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီလအတိုးအပြောင်းမှာလက်ထောက်ကထိကရာထူး(၃-၁၂-၂၀၁၅)မှာစပြီးတိုးခဲ့တာက(၃-၁၂-၂၀၁၈)မှာ သုံးနှစ်ပြည့်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲ တဆင့်မြင့် ကထိက ရာထူးကို အပြောင်းအရွှေ့တွေနဲ့အတူတိုးပေးတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, December 07, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
၁၃၈၀ ပြည့်နှစ် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၇)ရက်
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, November 29, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဆီးဖြူသီး ကိုပြုတ် မဆလာဆားအရသာမှုန့်ထည့်နယ်ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်နဲ့နှပ်ထားတာကို ကြက်သွန်နီငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ပြန်သုပ်
တခါတလေလည်း သနပ်ချည်းပဲ ထမင်းပူပူနဲ့စားဖြစ်တယ်။ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် ကြက်သွန်နီနဲ့သုပ်စားတယ်။
ဒါကတော့သနပ်အဖြစ်ကြာကြာထားမရလို့ နှပ်ထားတဲ့သနပ်ကိုဆီနဲ့ကြော်ပြီး ငါးနီတူခြောက်ရောထားတာ
ဗူးနဲ့ထည့်ပြီးကျောင်းကရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားပြီးညနေစာစားခါနီးမှထမင်းနဲ့အတူမိုက်ခရိုဝေ့ထဲထည့် နွှေးစားတာ တော်တော်ကြာကြာစားလိုက်ရတယ်။
ကျောင်းထဲက ကန်ပတ်လည်မှာဆီးဖြူပင်တွေအများကြီးတွေ့တာ အသီးတွေလည်းသီးတယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့ထိုင်းတွေက မစားတာလားမသိ တစ်ယောက်မှမခူးမဆွတ်တော့ ကိုယ်လည်း မခူးရဲဘူး။
ဒီသနပ်လုပ်တာကတော့ မြန်မာဆိုင်တွေရှိတဲ့ဈေးမှာ ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရှားရှားပါးပါး ရောင်းနေတာတွေ့လို့ ဘတ် ၂၀ ဖိုး ဝယ်ပြီးသနပ်လုပ်တာ။ နှာခေါင်းသွေးထွက်တုန်းကဆို ဆီးဖြူသီးကသွေးတိတ်တယ်ဆိုလို့ ခဏခဏစားတာ။ အမေကလည်း ဆီးဖြူသီးခြောက်လှန်းပြီး ထည့်ပေးတယ်။နိုင်ငံခြားရောက်တော့အသုံးဝင်လိုက်တာ။ဆီးဖြူသီးခြောက်ကို ချွေတာရေးနဲ့စားရတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, November 17, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒီနေ့ရွာမှာရောက်နေတဲ့ညီငယ်က Messenger ကနေ ကျနော်တို့အိမ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးပို့ပေးတယ်။
မိတ္ထီလာမှာကျောင်းတက်တုန်းက ကျောင်းပိတ်လို့ရွာပြန်ရင် အပင်တွေသယ်ပြီးစိုက်တာ
အခုဒီပုံထဲက ဗာဒံပင်က အညာသားစိုက်ထားတာ ဒီတစ်ပင်ပဲကျန်တော့တယ် ထင်တာပဲ။
မှာပေါ့။ညီငယ်ပို့ပေးတဲ့အိမ်ပုံတွေကြည့်ပြီးညီအစ်ကိုတစ်တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့Group Chat မှာအဖေနဲ့အမေရဲ့
စာရေးသူ ရှညောသား at Tuesday, October 23, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, October 19, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook